नहरै बेचेपछि कारागार | चितवन पोष्ट दैनिक
नहरै बेचेपछि कारागार
२०७१ फाल्गुन १८, सोमबार ०१:५० गते
भरतपुर । वषौँअघि नहर र पिच बाटोमा परेको तर मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा नगर्दा लालपुर्जामा भने कायम रहेको जग्गा बेच्दा भरतपुरका एकजना कारागार पुगेका छन् । बिक्रीअघि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राखेर उनले ऋणसमेत लिएको खुलेको छ ।
यस्तो जग्गा झुक्काएर बिक्री गरेको अभियोगमा चितवन जिल्ला अदालतले भरतपुर ११ का गणेशबहादुर कुमाललाई ११ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको छ । अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी कारागार चलान भएका छन् ।
न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेले शुक्रबार उनीसँग धरौटी माग्ने र मागेको धरौटी राख्न नसके कारागार पठाउने आदेश दिएका हुन् । कुमालले तेजकुमारी खरेललाई बेचेको १५ धुर जग्गा फर्जी भएको आधारमा अदालतले सो आदेश दिएको हो । खरेलले अघिल्लो वर्षको पुस १९ मा गणेशबहादुरसँग जग्गा किनेकी थिइन् ।
‘मलाई भरतपुर बसेनीमा रहेको जग्गा देखाएका थिए । जग्गामा टौवा पनि थियो । गाई, भैँसी पनि बाँधेका थिए । राम्रो लागेर किनेँ । तर मलाई झुक्काएको पछिमात्रै थाहा भयो’ खरेलले भनिन् ।
नारायणगढमा फलफूल बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी खरेलले एक÷एक रूपैयाँ बचाएर जम्मा गरेको १० लाख रूपैयाँ तिरेर जग्गा किनेको बताइन् । किनेको जग्गमा एक वर्षपछि घर बनाउन खोज्दा उनले आफू ठगिएको बल्ल पत्तो पाएकी हुन् ।
‘घर बनाउनका लागि नाप जाँच गर्न खोज्दा मलाई देखाएको जग्गा अर्कैको हो भन्ने खुल्यो । पछि नापी कार्यालयमा गएर खोज्दा मलाई बेचेको खास जग्गा नहर र पिच बाटोमा परेको थाहा पाउँदा म छाँगाबाट खसे झैँ भएँ’ खरेलले भनिन् । नापी कार्यालयले गएको पुस २३ गते लेखेको पत्रमा खरेललाई कुमालले बेचेको जग्गा पिच बाटो र नहरमा पर्ने उल्लेख छ ।
गणेशबहादुरले कित्ता नं. ३१८ को जग्गा खरेललाई बेचेका हुन् । ‘कित्ता नं. ३१८ को जग्गा पिच बाटो र नहरमा परे पनि मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा गर्न बाँकी नै रहेको छ । त्यो जग्गा लिने व्यक्ति मर्कामा परेको देखिन्छ’ जिल्ला नापी कार्यालयले काटेको पत्रमा भनिएको छ । नापीबाट यो जानकारी पाएलगत्तै कुमालविरुद्ध चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
पुस २३ मा प्रहरीमा उजुरी परेपछि गणेशबहादुर माघ १७ मा समातिएका हुन् । गणेशबहादुरले जग्गा बेच्नुअघि बैँकमा धितो राखेर ऋणसमेत झिकेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नारायणगढ शाखामा धितो राखेर दुई लाख रूपैयाँ ऋण झिकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । खरेलले जग्गा किन्ने भएपछि उनैले बैनास्वरुप दिएको पैसा बैँकमा बुझाएर जग्गा फुकुवा गरिएको थियो ।
‘बैँकमा धितो भएको जग्गा पक्काजस्तो लागेको थियो । आखिरमा यस्तो लफडामा फसियो’ खरेलले भनिन् । भरतपुर क्षेत्रमा १५ धुर जग्गालाई कम्तीमा पनि ३०÷३५ लाख रूपैयाँ पर्ने अवस्था छ । ‘मैले जग्गा किन्छु भन्ने थाहा पाएपछि दुई चारजना मान्छेहरु आएर त्यही जग्गा किन कि किन, सस्तोमा पाइएको छ भनेर लागे आखिरमा यस्तो नक्कली काम पो गरेछन्’ खरेलले भनिन् ।
खरेललाई जग्गा किन्न प्रेरित गर्ने र जग्गा देखाउने काममा संलग्न भएका अन्य दुईलाई पनि प्रहरीले समाएको थियो । उनीहरु जग्गाको राजीनामा पास गर्दा साक्षीका रुपमा पनि बसेका थिए । त्यसरी साक्षी बसेका रामबहादुर भण्डारी र डिलकुमारी गुरूङविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । अदालतले मागेको ५० हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर दबै रिहा भएका छन् ।
गणेशबहादुरले कित्ता नं. ३१८ को १५ धुरमध्ये आठ धुर जग्गामात्रै नहर र पिच बाटोमा परेको बयान दिएका छन् । साथै आफूलाई बैंकमा तिर्न आवश्यक परेको दुई लाख रूपैयाँ जुटाउनका लागि खरेलबाट पैसा लिएको बताएका छन् । छ महिनाभित्र सावाँ ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्ने र त्यसो नगरेमा जग्गामा पूर्ण हकभोग हुने सर्तमा मात्रै राजीनामा पास गराएको गणेशबहादुरले बयान दिएका छन् ।
‘मालपोतले समयमै लगत कट्टा नगर्दा यो समस्या आएको देखिन्छ’ थुनछेक आदेशमा गणेशबहादुरको तर्फबाट बहस गरेका अभिवक्ता लक्ष्मण अधिकारीले भने । साथै जग्गा पास गरेर दिएकै दिनमा गणेबहादुरले खरेलबाट लिएको पैसा छ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने लिखित सम्झौता पनि गरेकाले यसलाई ठगी भन्न नमिल्ने अधिवक्ता अधिकारीले बताए ।
‘छ महिनाभित्र पैसा फिर्ता गरेर जग्गाबापस लिने भन्ने लिखित सम्झौता नै छ । तर छ महिनाभित्र पैसा फिर्ता नगरेकाले उनीविरुद्ध करार उल्लंघनमा उजुरी गर्न सकिन्थ्यो । ठगीमा हैन’ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।